Ikhaya » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Ayisiyiyo kuphela ukhenketho eya kuphela eArgentina, eUruguay naseParaguay ngeCawa
Ayisiyiyo kuphela ukhenketho eya kuphela eArgentina, eUruguay naseParaguay ngeCawa
Ayisiyiyo kuphela ukhenketho olume ngeCawa, kodwa uninzi lwemisebenzi yanqunyulwa kwizigidi ezilishumi zabantu eArgentina, eUruguay naseParaguay emva kombane omkhulu osikiweyo.
Abasemagunyeni babesebenza bexhalabile ukubuyisa amandla, kodwa isinye kwisithathu sabantu abazizigidi ezingama-44 eArgentina babesebumnyameni ngorhatya.
Uthutho loluntu lumisiwe, iivenkile zivaliwe kwaye abaguli abaxhomekeke kwizixhobo zonyango lwasekhaya babongozwa ukuba baye ezibhedlele kunye neejenereyitha.
Iigridi zamandla eArgentina zikwimeko yokungalungisi, kufakwe izinto ezitshintshayo kunye neentambo ezingaphuculwanga ngokwaneleyo njengoko amaxabiso ombane ahlala ekhenkcezile iminyaka. Ingcali yamandla azimeleyo yaseArgentina yathi ukusebenza kwenkqubo kunye neempazamo zoyilo zidlale indima ekuweni kwegridi yamandla.
Inkampani yamandla eUruguay i-UTE ithe ukusilela kwenkqubo yaseArgentina kunciphise amandla kuyo yonke iUruguay ngaxeshanye kwaye kusolwa ukuwa "kwesiphene kwinethiwekhi yaseArgentina."
EParaguay, amandla kwiindawo zasemaphandleni emazantsi, kufutshane nomda neArgentina kunye neUruguay, nawo anqunyulwa. Ulawulo lwezaMandla kuZwelonke lweli lizwe lwathi inkonzo ibuyiselwe emva kwemini ngokudlulisela amandla kumzi mveliso wombane weItaipu ilizwe eli labelana neBrazil engummelwane.
EArgentina, kuphela lelona phondo likumazantsi eTierra del Fuego elingakhange lichukunyiswe kukucinywa komxokelelwano wombane kuba alidibananga negridi yamandla ephambili.
Amagosa aseBrazil naseChile athi amazwe abo awachaphazelekanga. Ukucinywa kwayo kwakungazange kubonwe ngaphambili